आर्थिक – Annapurna Post News
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ ७ गते संसदमा प्रस्तुत गरिँदै
May 11, 2022 sujaLeaveaComment on सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ ७ गते संसदमा प्रस्तुत गरिँदै
काठमाडौं । सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम आउँदो जेठ ७ गते संसद्मा प्रस्तुत गरिने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ३ गतेका लागि संसद् अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् । सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम जेठ ७ गते संसद्मा सार्वजनिक गर्ने कार्ययोजना बनेको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । […]
May 10, 2022 May 10, 2022 sujaLeaveaComment on डलरको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड, कमजोर बन्दै नेपाली मुद्रा
काठमाडौं । अमेरिकी डलरले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार मंगलबार एक अमेरिकी डलरको सटही विनिमयदर १२४.२५ रुपैयाँ छ । यस्तै, यसको खरिददर १२३.६५ रुपैयाँ छ । जुन, अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दु हो । गएको फागुन २४ गते डलरको भाउ हालसम्मकै उच्च अर्थात् १२३ रुपैयाँ ४४ पैसा पुगेको थियो । त्यसलाई नयाँ रेकर्ड […]
May 10, 2022 sujaLeaveaComment on आज तोलामा ७ सय घट्यो सुन, कतिमा हुँदैछ कारोवार ?
काठमाडौं – नेपाली बजारमा सुन चाँदीको भाउ घटेको छ। मंगलबार सुन तोलामा ७ सयले घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आज सुन तोलाको ९८ हजार कायम भएको छ। यस अघि सोमबार सुन तोलाको ९८ हजार ७ सयमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै तेजावी सुन तोलाको ९७ हजार ५ सय निर्धारण महासंघले जनाएको छ। त्यस्तै चाँदीको […]
April 30, 2022 sujaLeaveaComment on नेपालमै बन्छ रु. ३० लाख पर्ने विश्वको चर्चित र महँगो घडी, नेपालमा खोलेको कारखाना विश्वमै पहिलो !
नेपालमा विश्वकै चर्चित घडी बन्ने तथ्य खुलेको छ । एउटै घडीको मुल्य नै २४ हजार ५०० डलर छ अर्थात् झन्डै ३० लाख नेपाली रुपयाँ । नेपालमा कोबोल्ड हिमालय सिरीज ब्रान्डमा उत्पादन हुने गर्छ । उक्त कम्पनीको वेव साइटका अनुसार हिमालय एभरेष्ट (HIMALAYA EVEREST EDITION II) एडिसन दुईको मुल्य हो ३० लाख । त्यो भन्दा अर्को […]
April 13, 2022 sujaLeaveaComment on कागतीको भाउ एक दानाकै १५ रुपैयाँ!
कागतीको भाउ आकाशिएको छ। अहिले खुद्रा बजारमा एक दाना कागतीकै १५ रुपैयाँभन्दा बढी पर्न थालेको छ।कालीमाटी तरकारी बजारमा कागतीको होलसेल मूल्य नै दुई गुणासम्म बढेको छ। बुधबारको मूल्य सूचीअनुसार कालीमाटीमा कागती प्रतिकिलो ३७५ रुपैयाँसम्म बिक्री भएको देखिन्छ। कालीमाटी तरकारी बजारका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठका अनुसार एक महिनाअघि सम्म कागती प्रतिकिलो डेढ/दुई सय रुपैयाँसम्म बिक्री हुन्थ्यो। […]